Visual Website Optimizer: Mụbaa Ahịa na Ntughari | Martech Zone
Tọzdee, Nọvemba 14, 2013 Saturday, October 18, 2014 Douglas Karr
Visual weebụsaịtị Optimizer bụ Ngwa nyocha A / B nke ahụ na-enye ndị ọkachamara ịzụ ahịa ohere ịmepụta ụdị dị iche iche nke weebụsaịtị ha na ọdịda peeji nke iji nchịkọta isi na-pịa wee hụ nke mbipute na-ewepụta oke ntụgharị ma ọ bụ ahịa. Visual weebụsaịtị kachasị mma na-agbanwe agbanwe sọftụwia na-anwale ọtụtụ (zuru usoro ihe omuma) ma nwee ọnụ ọgụgụ nke ngwaọrụ ndị ọzọ dịka ezubere iche maka omume, okpomoku, iji nyocha, Wdg
A / B ule - Anya mepụta nsụgharị dị iche iche nke ebe nrụọrụ weebụ gị na ntanetị dị mfe na-pịa.
Nnwale dị iche iche - Ghọta mgbanwe ndị dị na weebụsaịtị gị kachasị site na ịmepụta nsụgharị na ịlele akụkọ arụmọrụ oge.
Kewaa Ule URL - Kewaa okporo ụzọ n'etiti nsụgharị dị iche iche ma ị nwere ike ịlele nke na-eme nke ọma.
Behavioral & Geo ezubere iche - Hazie ibe weebụ gị ma ọ bụ peeji ọdịda dị ka ọbịa ọ bụla iji mụbaa ahịa.
Okpomọkụ & Pịamaps - Jiri anya nke uche gị hụ ebe ndị ọbịa gị na-apị ụdị ọdịiche dị iche iche. Heatmaps na-egosi gị ebe ndị ọbịa gị na-apị na ebe ha na-anọghị.
Nnwale ojiji - Ọ bụrụ n ’ịchọrọ echiche nnwale A / B ma chọọ inweta aro mmelite maka ibe weebụ gị ma ọ bụ ibe ọdịda, jụọ ndị ọrụ usersntanetị na ngalaba anyị.
Na-ebuli Weebụsaịtị Mobile & Mbadamba ụrọ - Ọ bụrụ na ị nwere ọdịda peeji nke ma ọ bụ webpages nke emepụtara maka ekwentị na mbadamba, ị nwere ike ịkwalite ha ugbu a na nchịkọta akụkọ nke na-e emomi ndị mobiles na mbadamba.
Visual weebụsaịtị Optimizer nwere WYSIWYG (Ihe See Na - ahụ Bụ Ihe Get Na - enweta) ma ọ bụ onye editọ HTML yana akụrụngwa nwere ike tinye ya na enweghị mkpa maka nkenye IT… naanị tinye snippet koodu ma ị dịla njikere ịga. Ngwa mgbakwunye na-eme ka ọ dị mfe karị ijikọ ikpo okwu na Analytics, Content Management Systems (gụnyere WordPress) na Carzụ ahịa.
Tags: ule uleadobe saịtị saịtịezubere iche maka omumepịapịaDrupalgeo-ezubere ichegeotargetingGoogle AnalyticsokpomokuJoomlamagentonjikarịcha ekwentịnnwale dị iche ichegbawara n'etiti ulembadamba njikarịchaiji nyochaichapuWordPress